iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #232 by Numan28
Molo! I ukulandwa A330-300-200 Package.
Kodwa akukho VC kwi zam Turkish Airlines A330-300:
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #233 by Dariussssss
Kukho iinguqulelo ezimbini kwiphakheji, omnye yenziwe POSKY, ukuba umntu akanayo i VC. Enye engenziwe ngu Thomas uRute abe VC.
Akukho thazeka, ukuba yonke ifakwe kakuhle, kufuneka zombini.
Usazise xa kukho naziphi na ezinye iingxaki.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #235 by Numan28
Nguwuphi na kubo luguqulelo POSKY kwaye luguqulelo Thomat uRute?
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #238 by Dariussssss
Xa usiya ukhethe moya, kukho 3 drop-phantsi uluhlu, okanye menu: moya umenzi, umshicileli kunye nohlobo moya. Nqakraza kwi umshicileli, khetha Thomas Ruth. Musa ukuxhala ukuba ubona Thomas uRute-Luis Quintero, yinto enye.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #239 by Numan28
Ingaba akukho a330-300 okanye 200 kunye izihlalo lwabakhweli VC?
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #242 by Dariussssss
yeh .... akukho nofifi ngazo koko, ngokwenene. Njengaye Ndathi, A330 ngu TR iza VC, kodwa ngaba une ekharejini abakhweli, ngokwenene asazi. Mna pack efanayo ifakiwe kodwa ukususela andikhathali malunga ndlwana, mna andifuni kuba.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #243 by Numan28
Kodwa akukho A330-300 uThomas uRute kukho ezininzi kwinguqulelo posky, yaye wathi ukuba ngaphandle VC
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #244 by Dariussssss
Kulungile, kuqala -give kum ngekhonkco pack moya kwakho ukulandwa
Okwesibini, ukusuka apha okanye kwenye indawo?
Okwesithathu, is it efakwe ngokuchanekileyo?
Nguye lo bendixela kufuneka: http: //www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/6/799
tye ngoku, e FSX wam ndoba TR A330-300 phezulu kwaye isebenze. Ngoko ke, sinike ulwazi olubanzi.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #245 by Gh0stRider203
Dariussssss wabhala: kanye ngoku, e FSX wam ndoba TR A330-300 phezulu kwaye isebenze. Ngoko ke, sinike ulwazi olubanzi.
ok kakuhle, mna yakho ezintandathu F-14, sidewinders itshixiwe phezu kwenu ukususela sele ibhengeziwe ekujoliswe ngolunya ..... ndiye banikwe the go-phambili nomlilo ukuba wenza ngohambo olunye engalunganga .....
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #246 by Dariussssss
Into wenza okubi? Ngokwenene wenza konke okusemandleni ukunceda apha. Ukuba ndithe okanye wenza into engalunganga, Ndiyaxolisa nto, kodwa eneneni andicingi mna.
Ixesha ukwenza page: 0.417 imizuzwana